Izinhlobo Ezihlukile Zokusika Kwe-Dredge - i-Ellicott Dredges
Uyini umsiki weDredge?
I-cutter isho uhlobo lwenhloko ye-excavator efana ne-cutterheadhead noma i-bucketwheel ku-hydraulic pipeline dredge. Umsiki uhlala ekudleni futhi usetshenziselwa ukusika noma ukuvusa okomshini okhiqizwayo.
Abasiki banemisebenzi emibili eyisisekelo:
Abasiki bebhasikidi bahluka ngesimo, usayizi, umkhawulo wokusika, i-angle, nendlela yokunamathisela.
Umsiki wobhasikidi wendabuko ocijela ekugcineni komqhele webanga ngalinye emuva ngaphakathi kuya endaweni yokudonsa yokuxhaswa. Umsiki webhasikidi wenzelwe ukudweba izinto ezigeleza-mahhala uma kuvikela ukungena okuvundayo ekuthini kuhlanganiswe yizinto ezisetshenziswa ngokweqile.
Abasiki bebhasikidi basebenza ngezindlela eziningi zezicelo. Ubungako bomsiki bunqunywa noma kukalwe kumpompo we-dredge ukuhlinzeka ngenani eliphakeme kakhulu lamandla we-solids ohlelweni lokuphampu lwe-dredge.
I-Ellicott Series 370 ne-670 Dragon dredges ejwayelekile ukufaka isentimitha esingu-31.5 (800 mm) kanye nesinqe sebhasikithi esingama-intshi (43 mm) ngokulandelana, kuyilapho i-Series 1,090 Dragon® dredge ifakwe umsiki we-intshi angama-1270 (54 mm) . Ububanzi besilinganiso somsiki bunobubanzi bejubane elithile lokusika namandla okusika.
Abasiki bebhasikidi bangafakwa namazinyo anqenqemeni angenakuqalwa abekwe kuma-basket cutter blade kwizicelo eziqine. Lapho amazinyo egqoka, angashintshwa kalula.
Umgodi wokuqala wamatshe owenziwe nge-Ellicott ® owaziwa ngokuthi yi-Ellicott ® wethulwa embonini yokwakha kabusha ngo-1976. I-barkwheel ngokujwayelekile ithengiswa njengengxenye ehlukile eyenziwe ngokwezifiso futhi isetshenziswa kakhulu kwizicelo zasemayini. Amakhethini wamabhakede ayinkimbinkimbi aqukethe isondo elijikelezayo lamabhakede angenasisekelo anamathiselwe emgodini we-lateral. Udoti uwela egumbini elingaphakathi lesondo ngesimo esifiphele, uqonde ngqo empompini yangemuva ngendlela yomlomo wokugxoba futhi otholakala ngaphakathi kwesondo. I-barkwheel iyithuluzi lokumba elihle kakhulu lezinto zokwakha ezinzima, ibumba ngokulinganayo kuzo zombili izindlela zokubhukuda, ikwazi ukuphatha amaminerali asindayo, kanye nokumba okuningana nasezindleleni ezijulile.
I-barkwheel igxilisa kakhulu amandla alo amahhashi (i-HP) ngobude obufushane bebhakede ngalinye, ivumela isondo lebhakede ukuba libe namandla aphindwe kathathu amandla okusika ibhasikidi wendabuko. Ukugcina umsiki webhakede kungabiza kakhulu futhi kudinga ukusebenzisa i-slud carriers, ebiza kakhulu kunamalungiselelo endabuko yokuhamba nge-spud. Noma kunjalo, kwezinye izinhlelo zokusebenza, izindleko azinakwa ngokusebenza okuphakeme kwe-dredge.
I-Ellicott Dredges, LLC inikeza abasiki bebhasikidi ne-bananawheel ngezimo ezahlukahlukene nobukhulu. Ukuthola imininingwane eyengeziwe mayelana nabasiki bezindlu zethu, sicela uxhumane nathi ku sale@dredge.com noma uqedele eyethu ifomu leprojekthi, futhi othile uzokuthinta kungekudala.